ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: လဂျားယန်သာမက ကချင်ပြည်နယ်အနှံ့ ထိုးစစ်များ ရပ်ပေးသင့်ကြောင်း KIO ထုတ်ပြန်
ကချင်ပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ အရာရှိစစ်သည်တွေကိုမေးကြည့်ပါ
ရပ်သင့်တာကြာပါပြီ ။ အရင်အခအန ရောက်ဖို့ တော်တော်လိုသေးတယ်။
KIA ဒူဝါကမ္ဘာ ဂွမ်းရှောင် ကျေးဂျုးကမ္ဘာဆိုင်***
ဒီနေ့ sunday မှာဘုရားသခင်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးပါစေ
ဘာကို ကျေးဇူးတင် နေတာလဲ??တံတားဖျက် ဗုံးခွဲ
ဆက်ကြေးကောက် အဖျက်လုပ် နေတာကို ကျေးဇူးတင် တာလား။။။ပြောစမ်း
၂၀၀၇ သံဃာ့အရေးမှာ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့တဲ့ KIA, မသိနားမလည်တဲ့ ရိုးသားတဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေအကြား ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ လူမျိုးရေးဝါဒဖြန့်ချိမှုနဲ့ စစ်အာဏာထူထောင်ထားတဲ့ အာဏာရှင်တစုရဲ့ KIA... KIA ခေါင်းဆောင်တွေ ဘယ်လိုနေထိုင်တယ်၊ သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကဘာတွေလဲ။ ကချင်ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲတွင်းနက်နေပေမယ့် သူတို့သားသမီးတွေ ဘယ်လိုနိုင်ငံတွေမှာ ဘယ်လို ပညာသင်နေသလဲ။ န.ဝ.တကို ဦးဆုံး ဒူးထောက်ခဲ့တဲ့ KIA ဟာ လွန်းဆွေဘလော့ဂ်မှာ သူရဲကောင်းတွေ ဖြစ်နေပါ့လား။ ရီရပါ့။
သို့ ဦးဇောင်းဟရား နဲ့ ဦး ဂမ် ရှောင် ခင် ဗျား .. ဆန္ဒ အရမ်း မ စော ဖို့ ဦးစွာ ပြော ကြား လိုပါတယ်။ ကောင်းပါပြီ uncle တို့ ပြောသလို ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင် စု တည် ဆောက် ကြ မယ် ဆိုပါစို့ ။ နိင် ငံ သားတွေ ဘက်က ရော အဆင် သင့် ဖြစ်နေ ပြီ လား ။ ဖက်ဒရယ် ဆို တဲ့ စနစ် က ရော ပြည်ထောင် စု မပြို ကွဲ ဖို့ ကို uncle တို့ အ နေ နဲ့ တာဝန် ခံ နိုင် ပြီ လား ။ တစ် ဦးချင်း အရည် အချင်း ပြည့် တဲ့ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင် စု တောင် ရပ်တည်လို့ မဖြစ် ခဲ့ဘူး။ အနီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ တရုတ် ပြည်တောင် ဘယ်လို ရပ်တည် နေရသလဲ ။ တိဘက်က တမျိုး ဟောင်ကောင် က တဖုံ ။ ကျွှန် တော် လည်း ဖက်ဒရယ် america ကို အရမ်း သဘော ကျတာပေါ့ ။ ဒီ လို ဖြစ်လာဖို့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ကြိုးစားဖို့ တော့ လိုလိမ့် မယ် ။ ဖက်ဒရယ် တည်ဆောက်မယ် ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံး သံသယ ကင်းကင်းနဲ့ သွေးစည်း ကြရမယ် ။ ဘာသာရေးခွဲ ခြားမှု တွေ ကင်းရှင်း ရမယ် ။ အဓိက အရေးကြီး ဆုံးက နိုင် ငံသားတိုင်း ပြည်ထောင် စု စိတ်ဓါတ် အား ကြီး ရမယ်။ ။
တခြားတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းလို့ ရပြီးဘာလို့ ကေအိုင်အေ ကအခြားတိုင်းရင်းသားတွေထက် ထူးခြားနေရတာလဲ အများနဲ့ တစ်ယောက်ဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့
မင်း commentက မင်းဟာ kia က အရိုးအရင်း လေးတွေ ကိုက်နေရ တဲ့ ကောင် ဆိုတာ သိပ်သိသာတယ်
အောင်းသူရေ- ဆက်ကြေးကတော့ တောင်းတာပေးတာ ကိုယ်တိုင်လဲမ်ြင်ရ ကိုယ်တိုင်လဲပေးရ မတန်တဆ ခဏခဏတောင်းလွန်းလို. ပြည်နယ်ထျဲမှာပါတ်ပြေးနေရပါတယ်။ အိမ်မကပ်နိုင်လို. မိန်းမနဲ.တောင်မအိပ်ရတော့တာ တနှစ်နီးပါးရှိသွားပါပြီ။ ကိုယ်တွေ.ကြုံလို.ကိုယ်တိုင်ပြေးနေရရင် မငိးကိုယ်ချင်းစာနိုင်လာမှာပါ။ငါတို.ရှမ်းတွေကူိုနှိပ်စက်။ တံတားမိုင်းခွဲလဲတရားတယ်ဆိုရင် စစ်ပွဲတွေလျှော.ချဘို.တို. ငြိမ်းချမ်းရေးတောင်းဆိုဘို. နိုင်ငံတကာကယ်ပါဦးတို. မင်းတို.KIA/KI0ရဲ.အထောက်အပံ့ခံ ၈၈မျိုးဆက်တို. သတင်းမီဒီယာတွေကယ်ပါဦးတို. ဗူဒ္ဓဘာသာသံဃာတော်တွေကယ်ပါဦးတို. ဦးလနန် ဒေါ်ဒွဲဘူတို.ကတဆင့် လွှတ်တော်ကယ်ပါဦးတို. ဘာတွေပြောဆိုနေစရာလိုလဲ ယောက်ဖရာ ဆက်တိုက်ကြပါစေပေါ့ မင်းသဘောကအကုန်လုံးသေကုန်ရင်အေးရောလား မင်းကိုယ်တိုင်ပေး မင်းကိုယ်တိုင်ပြေး မင်းအမျိုးတွေ အနှိပ်စက်ခံ အသေခံလာရရင် မင်းနားလည်လာမှာပါ။ ဟေ. ခေါင် -နမ်(မ်)ကျယ်အီး။
ကိုထက်ကြီး ပြောတာကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေလို့ အခုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ စစ်အစိုးရဟာ ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကိုလဲ နားမလဲသလို တိုင်းရင်းသားများအပေါ်မှာလဲ ဘယ်တော့ခါမှ ညီအကိုလို သဘောမထားပါ။ တန်းတူ အခွင့်အရေးမျိုးမပေးချင်ပါ။ ယခု မြန်မာ ၀န်ထမ်းလောက နဲ့ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွင်း တိုင်းရင်းသား လူမျိုးခြား ဘာသာခြားဖြစ်ပါက လုံးဝနေရာမပေးပါ။ တန်းတူ အခွင့်အရေးဆိုတာ အဲလိုနေရာမျိုးတွေကို ပြောတာပါ။ တရားသဖြင့် ညီတူညီမျှ အတူတကွ ပေါင်းသင်းနေထိုင်လို့
တာရမယ်ဆိုလျှင် တိုင်းရင်းသားများ ဖက်ဒရယ်ဆိုတာကြီးကို စကားထဲကို ထဲ့ပြောနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယခု ပြသနာဟာ ကျနော် အခုပြောတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေရဲ့ ဇစ်မြစ်ပါပဲ။ မသက်နိုင်လို့သာ လက်နက်ကိုင်နေရတယ်ဆိုတာကို ပြည်သူတွေ နားလည်သင့်ပါတယ်။
bal lo pyaw ya mer lae KIA oo see kyout pyaw dal ma lerr der ka thu dop GOD ka alo daw ler ber ler ma thi per buu al der thu dop pha yerr tha kin ko thwer pyaw per lerr ber lo myanmer government ler pyaw ter lae KIA YOU NEED TO THINKING ABOUT THAT.....
သိမ်းရတာ မခက်ဘူး။ထိန်းရတာသာမလွယ်တာ။ လူ့အလိုနတ်မလိုက်နိုင်နဲ့ငါ့မြင်းငါစိုင်းပဲခူးရောက်ရောက် နဲ့အာဏာရူးတွေနဲ့
tin htut said...
kia KIO တွေက တပ်မတော်က တဖက်သတ်ထ်ုးစစ်ရပ်တာအခွင့်ရေးယူးပြီးစစ်ရေးနဲ့မပတ်သက်တဲ့နေရာတွေဖျက်ဆည်းနေတာလက်ပ်ုက်ကြည့်နေရမှာလား ဒီအတိုင်းဆိုကချင်ပြည်နယ်တခုလုံးလမ်းတံတားတွေကုန်သွားမယ် ထုးစစ်ရငါမဆိုင်ရဲရင်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လက်တွဲကြပါ တပ်မတော်ကတိုက်ရင် နောက်ဆုတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူး အခုမှ ပ်ြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖေါ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့တွေဘာတွေလာမလုပ်နဲ့တော့
မင်းတို့ကောင်တွေက သဘောကောင်းတဲ့အစိုးရကိုပဲလာပြောနေကြတယ်။ အရင်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ အခုမင်းတို့အပေါ် ကောင်းနေတာပဲလေ။ ရထားလမ်းဗုံးထောင်မယ့် KIA ကိုတော့ ဒွဲဘူလည်းဘာမှ မပြောနိုင်ဘူး။ နေပြည်တော်သွာြး့ပီး စွာကျယ်စွာကျယ်လုပ်နေတယ်။ ဒီမှာတံတားတွေက ကုန်တော့မယ်။ KIA သတ်မှာကြောက်တော့ မပြောရဲဘဲ မသတ်မှာသေချာတဲ့ အစိုးရနဲ့ စစ်တပ်ကိုပဲ လာပြောနေကြတယ်။ တော်တော်တရားကျဖို့ကောင်း။ KIA က ပန်းနဲ့ပေါက်နေသလိုပဲ။ ပြောနေပုံတွေက။
အေး---မျှတတဲ့ပြည်ထောင်စု လိုချင်ရင် နင်တို့ပြည်နယ်တွေနာမည်ကို အရင်ပြောင်း၊ ဘာမှ အမျိုးနာမည်မထည့်နဲ့။ USမှာလိုပေါ့။ မြစ်ကြီးနားပြည်နယ်။ မေခပြည်နယ် စသဖြင့်ပေါ့။ စောက်မျိုးနာမည်တွေကို အစွဲနဲ့ ထည့်နေသမျှတော့ နင်တို့အင်အားရှိလာရင်လည်း အနိုင်ကျင့်ဦးမှာပဲ။ တကယ်သာ မဲပေးပြီး နိုင်သူ့နာမည်ရွေးကြစတမ်းဆို အဲဒီပြည်နယ်က ရှမ်းပြည်နယ်တောင် ဖြစ်ပြီ။ ဘာလို့ဆို အဲဒီပြည်နယ်ထဲမှာ ကချင်ဦးရေက အများဆုံးမဟုတ်လို့ပဲ။ ဒီကောင်တွေက ဒါကိုသိတော့ လက်နက်ကို မစွန့်ဘူး။ ဗမာကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူး။ ပြည်နယ်ထဲက တစ်ခြားတိုင်းရင်းသားတွေကို ကြောက်နေတာ။ လက်နက်မရှိရင် သူတို့ကို ပြည်နယ်ထဲက ငါတို့ ရှမ်းတွေ၊ လီဆူးတွေ၊ ရဝမ်တွေက လက်စားချေကြမှာ အသေအချာမို့ပဲ။ စာတွေဘာတွေလည်းဖတ်ပြီးမှ comment ရေးကြရင်ပိုကောင်းမယ်။
ဟုတ်တယ်ဟေ့ သူတို့လူကြီးပိုင်းတွေကတော့ မြို့ပေါ်မှာပဲ နေကြ ပြည်သူလူထုနဲ့ နှစ်ဘက်ရဲဘော်တွေဘဲ သေကြ ဒုက္ခ ရောက်ကြရတယ် kia ကလည်း လောဘသမား စစ်တပ်ကလည်းဒေါသ သမား ခံရတော့ တို့ပြည်သူ